🥇 ▷ Pixel 3a wuxuu ka bilaaban doonaa USD $ 399, isagoo ku loolamaya carshiga badhtamaha ✅
Pixel 3a wuxuu ka bilaaban doonaa USD $ 399, isagoo ku loolamaya carshiga badhtamaha
Waxaan maalmo kadib markay si rasmi ah u ogaadeen Pixel 3a iyo Pixel 3a XL Google. Aaladdaan – sida aan dhamaanteen u maleyneyno – waxay ku tartami doonaan bartamaha-dhexe, iyagoo u keenaya tikniyoolajiyadda kamaradaha aadka u weyn ee walaalohooda waa weyn qeyb aad uga qiimo badan.
In kasta oo fikradani u muuqato mid soo jiidasho leh, haddana waxaa weli la ogyahay waxa ay noqonayso kala duwanaanta qiimaha ay u geli lahaayeen si ay ugu tartamaan. Taasi waa ilaa maantadan, tan iyo kanaalka Youtube Tani waa Tech Maanta hubiyo in Moodelka ugu yari wuxuu bilaaban doonaa USD $ 399 midka ugu weyna wuxuu gaari doonaa USD $ 479 (CLP $ 270,000 iyo CLP $ 325,000 qiyaastii).
Kama aqaano adiga, laakiin haddii aaladahaani leeyihiin tayo sawirro la mid ah tan Pixel 3 ee asalka ah, tan waxay u noqon kartaa isbedel xag-jir ah oo ku jira midda aan hadda ognahay. Yaa garanaya? Laga yaabee inaan xitaa arki karnay imaatinkiisa suuqyo badan muddada dhow si aan isugu dayno inaan sii wadno xayeysiinta sumcadeeda.
Aasaasaha kanaalkan, Brandon Lee, ayaa marin u helay Sawiro muujinaya xirmada qalabkan, halkaasoo qaar ka mid ah astaamaha lagu yaqaan sidoo kale lagu muujiyey. Hadda waxaan ognahay inay jiri doonaan 64GB iyo 128GB nooc, ugu dambeyntiina shaashadda ugu yar waxay noqon doontaa 5.6 inji.
Mid kale oo ah wararka “la xaqiijiyay” waa midabka cusub ee lagu dari karo, kaasoo ah guduud quruxsan oo qurux badan oo leh badhanka korantada ee buluug huruud ah. Qaabkan cusubi wuxuu raacayaa macquulka midabyadii hore oo waa la magacaabay Purple-ish.
Anaga waxaan ku jiri doonaa Google I / O ee sanadkaan Waxaan rajeyneynaa bilaabida taleefannadan cusub, sida iska cad, waxaan sameyneynaa dhammaan weydiimaha lagama maarmaanka u ah inaan ogaano goorta aan helno.